Ny sary voalohany an'ny Galaxy Sport dia voasivana, tsy misy boribory mihodina ary misy vera miolakolaka | Androidsis
Na eo aza ny zava-misy fa ny rehetra dia variana amin'ny famoahana ny Samsung Galaxy S10 sy ny karazany hafa, tsy ny fitaovana ihany fa ny orinasa koreana dia mikasa ny hanolotra amin'ny herinandro / volana ho avy.
Azo inoana fa izao, rehefa nisy sary tafaporitsaka tamin'ny farany hoe hanao ahoana ny Galaxy Sport, ilay taranaka vaovao an'ny smartwatch an'ny Samsung, ao amin'ny kinova fanatanjahan-tena, jereo ny jiro amin'ny 20 Febroary ho avy izao miaraka amin'ny Galaxy S10.
Efa niresaka nandritra ny herinandro maromaro momba ny fanombohan'ny taranaka vaovao an'ny Galaxy Sport, fantatra amin'ny anarana hoe Gear Sport, isika noho ny fanovana ny anaran'ny Samsung tamin'ny famoahana ny Galaxy Watch tamin'ny taon-dasa, nanolo ny Galaxy Gear. Amin'izao fotoana izao izahay dia namoaka tsaho momba ny mombamomba azy, fa tsy misy sary.
Tapitra ihany ny fiandrasana ary araka ny lazain'ny tsaho, ity taranaka Galaxy Sport ity, no voalohany raha tsy manisy fiheverana ny Gear Sport isika, tsy mampiseho amintsika ny bezel mihodina mahazatra izay mandraka ankehitriny dia nampiavaka ny fanoloran-tenan'i Samsung amin'ny smartwatches.
Ity sary ity dia mampiseho takelaka fitaratra eo an-tampony somary miforitra mankamin'ny vatan'ny vy. Eo amin'ny ilany ankavanana, misy bokotra roa voamarika, izay azo atao fisaka sy tsy misy lalana, no ahafahantsika mifandray amin'ny fitaovana mampiseho endrika maoderina maodely kokoa ankehitriny noho ny maodely rehetra natombok'i Samsung hatrizay nidirany tamin'ity tsena ity.
Ny fanjavonan'ny bezel mihodina izay ahafahantsika mifanerasera amin'ilay fitaovana, dia manaitra indrindra, satria izy io no iray tamin'ireo zava-mahasarika azy hatrizay. Azo inoana fa ity asa ity mbola ho hita manodidina ny efijery, raha tsy hoe nanomana fahagagana hafa ho antsika i Samsung.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny sary voalohany an'ny Galaxy Sport dia voasivana, tsy misy famadihana bezel sy fitaratra miolakolaka
Ireo telefaona mahery vaika 10 amin'ny Janoary 2019, hoy ny AnTuTu
Hisy fironana vaovao tsy misy seranana ve ny fironana vaovao?